प्रेमीकाको यौन चाहना कसरी थाहा पाउने ? जानी राख्नुहोस् – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन २०, सोमबार २०:५०
ममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रोमान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही संवेदनसिल हुन्छन्, कोही रोमान्टिक ।
प्रेमिकालाई तपाइले सेक्सको लागि मात्रै उनलाई चाहनुहुँदैन उनी प्रति तपाईंको लगाव सेक्स भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ भनेर यस्तै कुराहरुले बताउँछ ।
२०७६ आश्विन २९, बुधबार २१:२९
कोक पिउने बानि छ ? साबधान यसले यस्तो गर्छ असर ।
२०७६ आश्विन ७, मंगलवार १५:३२